Shiinaha CNC EDM Hole Drill Machine (HD-640CNC) Soo-saar iyo Warshad | BiGa
Qiyaasta miiska shaqada 480 * 700mm
Safarka dhidibka Z2 220mm
Safarka xy axis 600 * 400mm
Max.workpiece miisaanka 650kg
Miisaanka mashiinka 1600kg
Kala-duwanaanta mashiinka (L * W * H) 1800 * 1800 * 2000mm
Haga inta udhaxeysa worktable 40-420mm
1.Waa maxay waqtiga dhalmada?
Badanaa waa 7 ~ 30 maalmood, mararka qaarkood waxaan leenahay keyd mashiinka qodista godka edm.
2.Waa maxay ku saabsan xirmada?
Xirmo dibedda ah: dhoofinta kiiska alwaaxda caadiga ah
Gudaha: xirmo filim ah
3.Miyaad siisaa tababar iyo ilaalin?
Haa, waxaad u diri kartaa shaqaalahaaga warshadeena, injineerkeenuna wuxuu siin doonaa tababar ilaa ay si farsamaysan ugu shaqeeyaan mashiinka.
4.Waa maxay nooca bixinta ee aad aqbasho?
T / T, L / C, paypal iyo wixii la mid ah. T / T, ka dib marka la xaqiijiyo amarka, 30% deebaaji ayaa loo baahan yahay. Iyo 70% dheelitirnaan ah waxaan u dirnaa alaabada.
5.Ma tahay adiga soosaaraha mashiinka EDM?
Dabcan, waxaan soo saare ka ahayn mashiinka qodista godka edm muddo 16 sano ah, waxaanan leenahay 10 sano oo taariikh dhoofineed ah, waxaan hubaa inaad ku qanci doontid tayada iyo adeegga. Had iyo jeerna waa lagusoo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeena qodista godka mashiinka Dongguan, Guangdong, Shiinaha.
Hore: Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC EDM (HD-450CNC)
Xiga: PCLS80200NC / PCLS90200NC / PCLS100200NC / PCLS120200NC Beam-nooca mashiinka mashiinka shiidi tareenka mashiinka mashiinka mashiinka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End,